ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်”၂၀၁၉”ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ၁နှစ်စာ ဟောစာတမ်း – Myanmar Magazine
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် မိမိဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြိး အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မည်မျှခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်စေ ထူးခြားစွာအောင်မြင်မှုရတတ်သည်။ မိမိ၏ ကံနှင့်ဥာဏ်ကို အားကိုယ်ပြိး မလျော့သော ဇွဲ့လုံဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုနှစ်တွင် အခက်များ တွေ့ကြုံလေ ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှု မကြာခင်ရတော့မည့်ဟု ယုံကြည့်ထားပါ။
မနှစ်က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမျှ ယခုနှစ်တွင် မုချအဆင်ပြေမှုလေတွေ တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ အရာရာအလေးနက်ထာပြိး လုပ်ကိုင်ကြိုးစားပါ။ ငွေရှင်၊ ကြေးရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ဥစ္စာရှင်များက မိမိအား ကူညီရန် ကံကြမ္မကစောင်ကြည့်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုသော် မကောင်းမှုဒူစရိုက်လုပ်ငန်များ၊ ဥပဒေပြစ်မှုမကင်းသော စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေ့ရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံ ရောက်ရှိလာတတ်သည်။
မိမိကံကို ထိမ်းသိမ်းပြိး ဘာသာရေ၊ဘာဝန၊ကမ္မဌာန်းထိုင်တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် အလှူအတန်းများ မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေးကမ်းလှူတန်း ဒါနပြုကြပါ။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း၊ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း အခွမ်းအလမ်းကောင်းများ တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။၂၀၁၉ခုနှစ် January (2)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ စတော့ရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အားကစားပွဲစတင်ခြင်း၊ ထီးကံစမ်း၊ စာပေလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ နေ့(1:25)နောက်ပိုင်း နားသ၊ ပဉ္စင်းခံ၊ ကင်းပွန်းတပ်၊ အနုပညာစတင်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစတင်၊ လုပ်ငန်းစတင်၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ အချစ်ရေးကိစ္စပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။
(9)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး နေ့စက်(1:57)နာရီအတွင်း ရှင်ပြု၊ နားသ၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးဝါးဖြန့်ခြင်း၊ စာပေလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်းနှင့်ရေကြောင်းခရီသွားလာခြင်းကောင်း၏။(16)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ရေတွင်းရေကန် ဆည်၊ မြောင်း၊ တာတမံ စတင်တက်တုဖော်ခြင်း၊ အားကစားပွဲများကျင်ပ၊ ထီးကံစမ်း၊ စာပေလုပ်ငန်းထုပ်ဝေဖြန့်ချီမှုလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ ရတနာရှာဖွေ့ခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းကောင်း၏။ (စလွယ်တင်နက္ခတ် မရပါ)(23)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ အနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ နံနက်(7:38)နာရီလွန် စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။ (နံနက်7:38နာရီအတွင်း အနဓျာယ) (ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ကရိုဏ်းမလွတ်ပါ)
ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် January (2,16)ရက် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။ယခုနှစ်တွင် * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင်းများတွင် အကျိုးရှိလဖြစ်၍ မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိရပ်တန်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ ကြာသပတေး၊ စနေသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရတတ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် February (13)ရက် ဤနေ့ အားကစားပွဲကျင်းပ၊ ထီးကံစမ်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်း၊ နံနက်(11:36)မတိုင်မီ ပညာစ၍သင်ယူခြင်း၊ စာပေးလုပ်ငန်း၊ ညနေ့(6:35)နောက်ပိုင်း မျိုးစေ့စိုက်ပျိုး၊ သစ်ပင်စိုက်၊ လုပ်ငန်းစတင်၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်နေ့စက်12:57မိနစ်လွန် ကုမ်ရာသီပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာအခါရ၏ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရ၏)(20)ရက် ဤနေ့ ရတွင်းရေကန် ဆည်၊ မြောင်း၊ တာတမံ စတင်တက်တုဖော်ခြင်း၊ အားကစားပွဲများကျင်ပ၊ ထီးကံစမ်းခြင်း၊ စာပေလုပ်ငန်များစာတင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ နံနက်(10:7)နောက်ပိုင်း ရှင်ပြု၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။(ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် နက္ခတ်မရ)
(27)ရက် ဤနေ့ နေ့လယ်(11:36)နာရီအတွင်း ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ အိမ်တတ်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေနွေးခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ပရဟိတလုပ်ခြင်းကောင်း၏။ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် February (13,20)ရက် အဝါရောင်၊ အနီရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။
* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင်းများတွင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးသတိထားပါ။၂၀၁၉ခုနှစ် March (20)ရက် ဤနေ့ ရက်ရာဇာမွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ အနေ့ကဇာတင်၊ ထီးတင်း၊ ဘုရားပင်ဆောင့်ခြင်း၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ နံနက်(10:32)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ရေနံတူးဖော်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း။
စီးပွားရေးဂဏ္ဍ -စီးပွားရေးတိုးတတ်လာမည်။ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း အကျိူးခံစားရပြိးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ ဝင်လာတတ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ထွန်း၍ ရွေဆိုင်၊ ရတနာလုပ်ငန်းအရောင်းအဝယ်၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရေပိုက်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးများ၊ သစ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု ချမ်းသာသုခရတတ်သည်။ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ကားအရောင်းအဝယ်းလုပ်ငန်း၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း အခက်ခဲများ အနှောက်အယှက်စီးပွားပြိုင်ဘက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးပေးနည်းလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် April (17)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ သတ္တဝါများကို ဘေးမဲ့လွတ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ရေစက်ချခြင်း၊ ဘုရားစေတီပုထိုးများသန့်ရှင်းခြင်း၊ အနေကဇာတင်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အိမ်သစ်တတ်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖွင်လှစ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။(နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့)အထူး ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများ တွက်ချက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင်း၊ မိမိထင်သလောက် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် နှင့် ဝေးကွာသွားရတတ်သည့်ကို သတိနှင့်လုပ်ကိုင်ပါ။ မိမိလုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းမိသာစု မိမိလုပ်ပေးထောက်ပံသလောက် အကောင်းအမြင် မခံရဘဲ မိမိစေတနာ ဝေဒနာဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင် ဆက်ဆံရမည်။ သို့သော် သူတပါးအားကိုယ်၍မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် May (1)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စဆောင့်ရွက်ခြင်း၊ထီးထိုး၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ အချစ်ရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။ (ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ယုဂ်မလွတ်ပါ)(15)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(10:32)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ လှေကားတင်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်း တူးခြင်း၊ ဘာသာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နေ့စက်3:32မိနစ်လွန် ပြိဿရာသီ ပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာအခါရ၏။ သို့သော် “သားဦး၊သမီးဦး”ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်အခါရှောင်ပါ။အိမ်ဆောက်၊အိမ်တတ်အခါရှောင်ပါ။) (မောဟနိ ဧကာဒသီ)
(29)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ ပဉ္စင်းခံ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ နေ့စက်(3:25)နာရီလွန် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ရေတွင်းတူး၊ အိမ်ပြောင်း၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။အသက် ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ နှစ်ရှိသူများ စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး ညံပါလိမ့်မည်။ထိုသက်ပိုင်းခြား ဇာတာရှင်ကတွေ့က ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီး လက်လွတ်စပယ်မလုပ်မိဖို့လိုသလို ငွေကြေးနဲ့ ပက်သက်ရင် မိမိအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝယ်ရောင်း အိမ်ဆောက်လို့. တိုလို့တန်းလန်း ငွေမြုပ်ခြင်း၊ ငွေပြန်မပေါ်တာ ကိစ္စမရှိတတ်၍ ငွေလူလ်ိမ်ခံရခြင်း၊ ရောင်းမှားဖြစ်ခြင်း အမှုခင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ မလိုအပ်တဲ့နေရာရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း၊ ငွေချေးတဲ့ကိစ္စများ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်က အတိုးမယူဘဲ လကနှဲတ်စာချုပ်စာတန်းနဲ့ ချေးရင်တောင်မှု ပြန်ရဘဲ ထွက်ပြေးထိန်းရှောင်သွားလိမ့်မယ်။
၂၀၁၉ခုနှစ် June (5)ရက် ဤနေ့ နံနက်(9:49)နာရီလွန် ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ထီထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ဆေးဝါ၊ဆေးဖော်၊ စာရေးသားခြင်းကောင်း၏။(19)ရက် ဤနေ့ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ ညနေ(4:25)နာရီလွန် ကင်းပွန်းတပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ လက်ရေးထိုးခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ အလုပ်လျောက်ခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်းကောင်း၏။သို့သော်(1-6-2019)နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင့်နှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ညီကိုမောင်နှချင်း စကားများခြင်း၊ အမွေအနှစ်ကိစ္စများပြောဆိုရခြင်း ကြုံရတတ်သည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် Junly (3)ရက် ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ နံနက်(8:45)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ပညာသင်၊ စာရေးသားခြင်း၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ငွေကြေားကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချစ်ရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။(17)ရက် ဤနေ့ ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဤနေ့ ဘုရားတည့်၊ ထီးတင်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အိမ်ပြောင်း၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဧည်ခံပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းကောင်း၏။
(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်သည် ညနေ5:56မိနစ်လွန် ကရကဋ်ရာသီပြောင်းပြိး ဖြစ်၍ စလွယ်တင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊စေ့၊လက်ထက်အခါရှောင်ပါ။ အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါရ၏။) (လကြတ်မည်။) (မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစွာမြင်နိုင်သည်)ဖမ်းစ-နံနက်1:56:36စက္ကန့် ၊ဖမ်းလယ်-နံနက်3:35:33စက္ကန့်၊လွတ်ဆုံး-နံနက်5:3:15စက္ကန့်။(အစိတ်အပိုင်းကြတ်) (31)ရက်ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နေ့လယ်(11:48)နာရီလွန် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ အိမ်တတ်၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကောင်း၏။
အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ -ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္လာ၊ အဂါင်္ * အနည်းအထစ်ငေါ့များ အကောင်းအဆိုးနှင့်ဒွန်းတွဲကျော်လွှားရတတ်ပြိး *ကြာသပတေး*အိမ်ထောင်ဘက်များ အနှောက်ချက်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကသိကအောက် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊ မကြာခဏ တကျက်ကျက် စကားများ ပြဿနာတတ် အငြင်းအခုံပြုလုပ်၍ ခေတ္တယာယီခွဲရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများမည်။၂၀၁၉ခုနှစ် August (28)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ယနေ့နံနက်(6:00)နာရီလွန် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ အ နာမည်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ အိမ်ပြောင်း၊ ထီးထိုး၊ ရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အလုပ်လျောက်ခြင်း၊ ဆေးဖော်ခြင်းကောင်း၏။
ထီးထိုးရန် -၂၀၁၉ခုနှစ် August (28)ရက် နို့နှစ်ရောင် ၊ အဝါရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။အချစ်ရေးတွင် စွတ်စွဲမှုအမျိူးမျိူးခံရကိန်းကြုံမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ အချစ်ရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူ၏အဖြေကို စောင့်နေရင့် မိမိအချိန်များ ကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မည်။ မိမိထက် ဝါကြီး၊ အသက်ကြီးသူတို့နှင့် ဆုံးဆည်းရခြင်း၊ ရပ်ဝေမှာ ဖူးစားတွေ့ရတတ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္ဂနွေ၊ စနေ့၊ သောကြာ*အိမ်ထောင်ဘက်များ အိမ်ထောင်ရေးသာစိုပြည့်၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း၊ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်၊ မိဘမောင်နှမဆွေမျိုးအမွေအနှစ်ရရှိခြင်း နှင့် အိမ်ယာ၊ တိုက်ခန်း၊ မြေယာ၊ ခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များ အတိုင်းအတာထက် ပိုဝင်ကိန်းကြုံမည်။ သားသမီး၊ တပည့်များ တိုးပွားမည်။ မိမိတို့၏ ရှေ့ရေး ဘဝခိုင်မြဲစေရန် အထောက်အကူရရှိစေရန် စိတ်ရှည်းသီးခံပြိး တပည့်မွေးမြူရန် သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် September (4)ရက် ဤနေ့ ယနေ့စက်(12:11)နာရီအတွင်း ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ တိုင်းထူ၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ တံတားပြုပြင်ခြင်းကောင်း၏။(18)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(6:51)မတိုင်မိ ဆိုင်သစ်ဖွင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ နံနက်(6:51)နောက်ပိုင်း ဘုရားအနေကဇာတင်၊ အားကစားပွဲကျင်းပ၊ ထီးကံစမ်း၊ စပါးရိတ်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြတ်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပရဟိတလုပ်ခြင်းကောင်း၏။(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်နေ့နက်4:59မိနစ်လွန် ကုန်ရာသီပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာ၊အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ)ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် September (18)ရက် မိုးပြာရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။
ပညာရေးဂဏ္ဍ -ပညာရေးတွင် ဘဝအတွက်ရည်မှန်းထားသောပညာရပ်များ ဂရုတစိုက် လေ့လာသင်ခြင်း ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ မိမိပညာရပ်များကို မိမိဝါသနာအရင်းခံ၍ ထွန်းပေါက်အောင် သင်ကြားပါ။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင် လုံးလ ဝီရိယရှိမှာသာ မိမိမျော်မှန်းရည်ရွယ်ထားသော ပညာရပ်များ အကောင်အထည့်ဖော်ခြင်း ဆည်းပူးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်၍ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမည်။ မိမိပညာရပ်များ သင်ရာတွင် သူတပါး၏ ကူညီမစ ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း၊ ရာထူးနေရာဌာနများမှ ထောက်ပံ့ ပံပိုးပေးခြင်းများ စံစားခံစားရကိန်းရှိသည်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ စက်မှုလက်မှု ပညာရပ်များဖြင့် အသက်မွေးကြောင်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် November (6)ရက် ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(9:51)နာရီလွန် ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ လက်ထပ်၊ ရေတွင်းတူး၊ ပညာသင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အင်တာဗျုခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဆေးကုသခံယူခြင်းကောင်း၏။(13)ရက်ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ထီထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နေ့စက်(1:9)နာရီအတွင်း ခရီသွားလာခြင်းကောင်း။
ကျန်းမားရေးဂဏ္ဍ – ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ဖျားနှားခြင်း၊ သွေးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ၊ သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊ လေနာရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရ ရခြင်း ရောဂါဝေဒနာ အထူးခံစားရတတ်သည်။ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာများနှင့်ဂရုတစိုက် ကုသမှုခံယူသင့်သောနှစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် *၃*ဂဏန်းရက် နှင့် *၅*ဂဏန်းရက် မွေးဖွားသူများ အထူးဂရုစိုက်ရလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် December (11)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ နေ့စက်(12:12)ဘုရားတည်၊ အနေ့ကဇာတင်၊ ဘုရားပင်ဆောင့်ခြင်း၊ အိမ်သစ်တတ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ရေတွင်းတူး၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ ထီးထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသခံယူခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်းကောင်း၏(25)ရက် ဤနေ့ နေ့စက်(12:23)ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ရေတွင်းတူး၊ ကျောက်သွေးလောင်းခြင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း၊ ဧည်ခံပွဲကျင်းပခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖွင့်၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်၊ ထီးထိုး၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းကောင်း၏။
ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် December (11,25)ရက် ဖက်ဖူးရောင်၊ အညို့ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။
ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ➖ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ရတနာသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* ပန်ရောင်၊ အညို့ရောင်၊ အစိမ်းရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။အကျိူးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉) အစိမ်းရောင် ရှိသော ရတနာများဝတ်ဆင်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော် -အရှေတောင်အရပ် သင့်တော်သောနေရာ၌ ကံကော်ပင်၊ ခရေပင်စိုက်ခြင်း၊ လမ်းခင်းခြင်း၊ တံတားဆောက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သရက်ပင်၊ သစ်ခွာပင်၊ သလဲပင် စိုက်ပျိုးခြင်းပြုလုပ်ပါ။
ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် ကြေးဖလားဖြင့် ရေတော်(၅)ခွက် ဘုရားလှူ ပေးပါ။ရွက်လှညွန့်၊ ပေါက်ညွန့်(၉)ညွန့်တို့ကို ရွှေအိုးဖြင့် ဘုရားတွင် ဆီးမီး(၅)ခွက်ပူဇော်ပေးပါ။အဘိုးအဘွားအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ငချိတ်ပေါင်း၊ အုန်းထမင်းများကိုလှူ ပေးပါ။
Credit:ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ 📱09456471357(Viber)
← ရေနွေးထဲ သံပရာရည် ထည့်သောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
စနေသားသမီးများအတွက်”၂၀၁၉”ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ၁နှစ်စာ ဟောစာတမ်း →
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စရိုက်သဘာဝလက္ခဏာ….
October 17, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စရိုက်သဘာဝလက္ခဏာ….
၇ရက်သားသမီးများအတွက် မတ်လ တစ်လစာ ဟောစာတမ်
March 4, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ၇ရက်သားသမီးများအတွက် မတ်လ တစ်လစာ ဟောစာတမ်